Qalabkee Amazon raadraaca ayaa kaa caawin kara inaad bilowdo ganacsiga e-ganacsiga?
Ka hor intaadan bilaabin iibinta shaqaalahaaga Amazon, waxaad u baahan tahay inaad ogaato xeerarka aasaasiga ah iyo istaraatiijiyooyinka si aad u noqotid kaqaybgalaha firfircoon ee cayaarahan tartan ee tartanka.
Amazon waa goob ganacsi oo caalami ah ee ganacsatada internetka ah si loo ballaariyo saldhigga macaamiishooda waxayna kor u qaadaan dakhliga guud ee ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaanad bilaabin safarkaaga ganacsiga ee ku saabsan hannaanka fantastic iyo faa'iido leh, aan ka jawaabno su'aalaha qaarkood oo ku saabsan aasaaska moobiilkan iyo raadso qaar ka mid ah qalabka raadraaca Amazon si aad ugu diyaariso ganacsigaaga guusha. Ammaanka ah ee iibinta iyo darajada nidaamka Amazon
Marka raadiye ku qoro sanduuqa raadinta ee Amazon, wuxuu helaa liiska ugu haboon ee loo yaqaan 'Amazon'
badeecaddiisa su'aalaha - cheap canadian vps hosting. Kadibna wuxuu u socdaa mid ka mid ah boggaga wax soo saarka ah iyo fariimaha ku qoran "bixinnada" ee hoos ku qoran sharaxaadda badeecada si loo ilaaliyo inta badan soo jeedimaha soo-saarka ee sheygan.
Intaa waxaa dheer, Amazon waxay siisaa dadka isticmaala suurtagal ah in ay ku dhamaystiraan "Buy Box." Sida ku cad xogta tirakoobka, in ka badan $ 62 bilyan oo iib ah ayaa dhacaya sanduuqa iibka. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la ogaado sida ay u shaqeyso.
Guud ahaan, sanduuq iibsigu waa kaararka wax lagu iibsado oo ku yaala bogga faahfaahsan ee alaabooyinka ay macaamiishu bilaabi karaan habka wax iibsiga.
Dhamaan alaabta oo dhan ma muuqan karaan iibsashada sanduuqa sida Amazon oo kaliya ayaa soo jeediya talooyinka ugu fiican ee suuqa si loo hubiyo in macaamilku iibsan doono. Si aad u guuleysatid Amazon Buy Box, waxaad u baahan tahay inaad macaamiishaada siiso qiimaha ugu macquulsan suuqa, waxay leeyihiin jawaab celin wanaagsan, maraakiib lacag la'aan ah, iyo sawirro tayo leh.
Waa haboon in la yiraahdo waa wax aan macquul ahayn in laga fekero in goobtaada ay waligeed u socoto si aad ugu sarayso inay noqoto qof iibsaday. Waxaad u baahan tahay inaad si xoog leh u shaqeyso oo kaliya adigoo adeegsanaya boggaaga Amazon-ka laakiin sidoo kale hoos yimaada dhaqanka ugu fiican ee lagu iibsado macaamiisha cusub. Waxyaabaha saameyn kara saadaashaada boggaaga iyo kartida aad ugu guuleysan karto iibsiga sanduuqa waxaa ka mid ah:
Waa fikrad adag oo ay ku jiraan qiimaha sheyga iyo kharajka . Waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee saameynaya heerka boggaaga iyo is-beddelka..
Dalabkii ugu fiicnaa
Si aad u fuusho TOP, waxaad u baahan tahay inaad siiso dadka isticmaala Amazon leh dalabka ugu fiican ee ku yaal suuqaaga. Taariikhda taariikhda shirkadda Amazon waxay ku leedahay suuq
Ganacsatada internetka ee haysta taariikhda iibka iyo taariikhda dheer ee Amazon waxay leeyihiin fursado badan oo hela mid ka mid ah dhibcaha ugu sareeya.
Tirada iyo tayada dib u eegista macaamiisha
Dib u eegista internetka ee wanaagsan ayaa ah qodob kale oo muhiim ah oo ku saabsan Amazon. Waxay leeyihiin saameyn la taaban karo oo ku saabsan iibinta baabuur wadista waxayna kaa caawin karaan inaad ku guuleysato sanduuqa iibsiga.
Hadda, markaad hayso fikrad ah sida nidaamka taxanaha Amazon u shaqeeyo, waxaad bilaabi kartaa ganacsigaaga ganacsiga ee ku yaal meeshan. Si kastaba ha noqotee, si loo fududeeyo loona sifeeyo nidaamkan, waa inaad ogaataa ciddii qalabka raadraaca ee Amazon inay si fiican u dabooli karto baahidaada ganacsigaaga. Qalabka ugu fiican ee Amazon raadinta
Qalabka muhiimka ah ee Amazon keyword
Qalabkan waxaa loogu talagalay inuu ku caawiyo track meeshii ay alaabooyinkaaga u kala qaybsan yihiin keywords keywords kala duwan. Qalabkan raadraaca ayaa kaa caawin doona inaad ku badbaadiso waqti badan oo ku siiso natiijooyinka ugu saxsan. Waxay sidoo kale ku siin doontaa aragti xiiso leh oo ku saabsan haddii isbeddelka aad samaysay, sare u qaadday qiimeyntaada ama maahan. Waxaa intaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad la socoto mawqifkaaga tartanka tartanka.
Semalt Amazon SEO
Qalabkan waxaa loogu talagalay inuu hagaajiyo boggaaga Amazon SEO isticmaalka gaadiidka baabuurta boggaaga wax soo saarka. Waxay ka caawisaa inay kor u qaadaan booskaaga boggaaga Amazon ee Google SERP iyo baabuur wado. Intaa waxaa dheer, iibsashada santuuqa Semalt ee qalabkan waxaad ka heli doontaa fikrado macquul ah oo wax soo saarka iibka ah, ololeynta isku-xirnaanta xiriirka ah iyo darajo heerarka isu-ururinta.